Max Cloud (2020) | MM Movie Store
အကျရှငျမငျးသားကွီး Scott Adkins ရဲ့ ကားသဈထှကျရှိလို့လာပါပွီ…၁၉၉၀ခုနှဈက ဗီဒီယိုဂိမျးတှခေတျေစားတဲ့အခြိနျပေါ့…Brooklynမွို့က ဆယျရာဆိုတဲ့ကောငျမလေးကလညျး လူငယျပီပီ ဂိမျးစှဲတဲ့သူပါ….တဈနတေ့ော့ သူနှိပျနကေဂြိမျးထဲက “အာကာသစုနျးမ”ရဲ့လကျခကျြကွောငျ့ ဆယျရာတဈယောကျဂိမျးထဲကိုဝငျသှားပါတယျ….
အပွငျလညျးထှကျလို့မရ၊ သူဝငျသှားတဲ့ဇာတျကောငျနရောကအသကျတဈခြောငျးပဲကနျြတော့တဲ့အတှကျ ဆယျရာဒုက်ခအကွီးအကယျြရောကျပါတယျ…ဆယျရာရဲ့သူငယျခငျြးကောငျးဘှိုငျက ဆယျရာ့ရဲ့ဂိမျးဇာတျကောငျကို ဆော့ပေးပွီးဆယျရာအပွငျပွနျထှကျဖို့ “အာကာသစုနျးမ”ကိုရှာဖို့ ကွိုးစားကွပါတယျ…
.ဒီလိုကွိုးစားတဲ့အခြိနျလူစှမျးကောငျး ကပ်ပတိနျ မကျဈကလောကျနဲ့တှတေဲ့အခါမှာတော့….ဘယျလိုအန်တရယျတှကေ ကွိုဆိုနမေလဲ…တျောလှပါတယျဆိုတဲ့ ကပ်ပတိနျကွီးကရောကျအကွမျးစား ရနျသူတှကေိုနှိမျနှငျးနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….
အက်ရှင်မင်းသားကြီး Scott Adkins ရဲ့ ကားသစ်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ…၁၉၉၀ခုနှစ်က ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေခေတ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့…Brooklynမြို့က ဆယ်ရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်း လူငယ်ပီပီ ဂိမ်းစွဲတဲ့သူပါ….တစ်နေ့တော့ သူနှိပ်နေကျဂိမ်းထဲက “အာကာသစုန်းမ”ရဲ့လက်ချက်ကြောင့် ဆယ်ရာတစ်ယောက်ဂိမ်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်….
အပြင်လည်းထွက်လို့မရ၊ သူဝင်သွားတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကအသက်တစ်ချောင်းပဲကျန်တော့တဲ့အတွက် ဆယ်ရာဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်ပါတယ်…ဆယ်ရာရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းဘွိုင်က ဆယ်ရာ့ရဲ့ဂိမ်းဇာတ်ကောင်ကို ဆော့ပေးပြီးဆယ်ရာအပြင်ပြန်ထွက်ဖို့ “အာကာသစုန်းမ”ကိုရှာဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်…
.ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အချိန်လူစွမ်းကောင်း ကပ္ပတိန် မက်စ်ကလောက်နဲ့တွေတဲ့အခါမှာတော့….ဘယ်လိုအန္တရယ်တွေက ကြိုဆိုနေမလဲ…တော်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကပ္ပတိန်ကြီးကရောက်အကြမ်းစား ရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….
9-1-1 (Season 2) ၊ အပိုငျး (၁၃)
Mr. Robot (Season 2) အပိုငျး (၇)
9-1-1 (Season 2) ၊ အပိုငျး (၅)
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၅)